Alakamisy 26 Novamb 2020. – FJKM
Boky nosoratan’ny Jiosy iray nahita ny fidiran’ny miaramila Babyloniana tao Jerosalema ny bokin’ny Fitomaniana . Hitany ny herisetra nataon’izy ireo , hitany ny nadoran’izy ireo ny Tempoly sy ny nandrobany ny fanaka masina sy volamena tao amin’ny Tempoly . Nalahelo mafy noho ny zavatra hitany ity mpanoratra ka nitomany . Bokin’ny fanantenana koa anefa ny Fitomaniana . Boky maneho fa tsara ny Tompo satria :
1-Maneho ny hatsarany amin’izay manantena Azy
Teo anatrehan’ny faharavana , teo anatrehan’ny fahapotehan’ny fireneny dia asehon’ny mpanoratra fa olona manana fanantenana izy . Manana fanantenana izy fa hitan’Andriamanitra izao zava-manjo azy sy ny fireneny izao . Ary ho avy ny fotoana mbola averin’Andriamanitra amin’ny laoniny izao zava-misy mampamoy fo azy izao . Manantena izy fa mbola haneho ny hatsarany ny Tompo satria manantena Azy izy .
2-Mamonjy izay mitady Azy
Ilay fanantenana tao amin’ny mpanoratra no nanosika azy hitady vonjy tamin’ny Tompo . Fantany fa afaka mamonjy azy sy ny fireneny Andriamanitra . Miandrandra izany izy , manantena izany famonjena izany izy . Azon’ny fahavalo atao ny manimba ny firenena sy ny zavatra rehetra ao aminy , fa tsy azony atao kosa ny manaisotra ny fanantenam-pamonjena ao amin’ny olon’ Andriamanitra . Anisan’ny fanehoan’ Andriamanitra ny fahatsarany sy ny famonjeny ny vahoakany sy ny olony izay manantena Azy .
Ahoana no fomba hamerenana indray ao amin’ny Malagasy , indrindra ny kristiana ny fanantenam-pamonjena avy amin’ Andriamanitra ?